ဗာဂျီးနီးယား Durr: မြို့ပြအခွင့်အရေးအဖြူရောင်တောင်ပိုင်း
ဗာဂျီးနီးယား Durr အချက်အလက်
လူသိများ: နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှု; 1930 နှင့် 1940 ခုနှစ်စစ်တမ်းကောက်ယူအခွန်ဖျက်သိမ်းဖို့လုပ်ဆောင်နေ; အထောက်အပံ့ ရိုပန်းခြံ
ရက်စွဲများ: သြဂုတ်လ 6, 1903 - ဖေဖော်ဝါရီလ 24, 1999
မိခင်: အမ်းပက် Foster
ခမညျးတျော: Stirling ဂျွန်ဆင် Foster, Presbyterian ဝန်ကြီး
မောင်နှမ: ညီမဂျိုးဇက်အနာဂတ်တရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးချုပ်ဟူဂိုက Black လက်ထပ်
Wellesley ကောလိပ်, 1921 - 1923
ခင်ပွန်း: Clifford Judkins Durr (ဧပြီ 1926 လက်ထပ်; ရှေ့နေ)
ဗာဂျီးနီးယား Durr အတ္ထုပ္ပတ္တိ:
ဗာဂျီးနီးယား Durr 1903. အတွက်သူမရဲ့မိသားစုလူတန်းစားခိုင်ခိုင်ခံ့ခံ့ရိုးရာနှင့်အလယ်တန်းခဲ့ဘာမင်ဂမ်, Alabama တှငျဗာဂျီးနီးယား Foster မွေးဖွားခဲ့သည်; တစ်ခရစ်ယာန်ဓမ္မဆရာ၏သမီးအဖြစ်သူမအချိန်အဖြူရောင်တည်ထောင်ခြင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမ၏ဖခင်ပုံယောန၏ဇာတ်လမ်းနှင့်ဝေလငါးစာသားနားလည်သဘောပေါက်ခံရဖို့ဖွစျကွောငျးကိုငြင်းပယ်ဘို့, သူ့ဓမ္မဆရာအနေအထားကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရ; သူကအမျိုးမျိုးသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အောင်မြင်မှုစေရန်ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်မိသားစုရဲ့ဘဏ္ဍာရေးကျောက်တောင်ရှိကြ၏။
သူမသည်တစ်ဦးအသိဉာဏ်နှင့် studious မိန်းမငယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမသည်ထို့နောက်ဝါရှင်တန်ဒီစီနှင့်နယူးယောက်မြို့ရှိပြီးသွားကျောင်းများသို့ပို့ခဲ့သည်, ဒေသခံလူထုကျောင်းများမှာလေ့လာခဲ့တယ်။ သူမ၏ဖခင်သူမကိုသူမတစ်ဦးခင်ပွန်းရှာတွေ့ချင်ပါတယ်သေချာစေရန်အလို့ငှာ, သူမ၏ကိုယ်ပိုင်အကြာတွင်ပုံပြင်များအရသိရသည် Wellesley တက်ရောက်ရန်ရှိခဲ့ပါတယ်။
Wellesley နှငျ့ "ဗာဂျီးနီးယား Durr Moment"
သူချင်းကျောင်းသားတစ်ဦးအလှည့်နှင့်အတူစားပွဲမှာအစာစားခြင်း၏ Wellesley အစဉ်အလာအတွက်သူမအနေနဲ့အာဖရိကန်အမေရိကန်ကျောင်းသားနှင့်အတူစားသောက်ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေသောအခါ, တောင်ပိုင်း segregationism များအတွက် Young ကဗာဂျီးနီးယားရဲ့ထောက်ခံမှုစိန်ခေါ်ခဲ့သည်။ သူမသည်ကန့်ကွက်ပေမယ့်အဲဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဘို့ဆုံးခဲ့သည်။
သူမသည်နောက်ပိုင်းတွင်သူမ၏ယုံကြည်ချက်အတွက်အလှညျ့အပွောငျးအတိုင်းဤရေတွက်; Wellesley နောက်ပိုင်းမှာ "Virgina Durr အချိန်လေး။ " အသွင်ပြောင်း၏ထိုကဲ့သို့သောအချိန်လေးအမည်ရှိ
သူမကဆက်လက်နိုင်ဘူးထိုကဲ့သို့သောသူမ၏ဖခင်ရဲ့ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အတူသူမ၏ပထမဦးဆုံးနှစ်နှစ်အကြာတွင် Wellesley ထဲက drop ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခဲ့သည်။ ဘာမင်ဂမ်မှာတော့သူမရဲ့လူမှုရေးပွဲဦးထွက်စေတော်မူ၏။ သူမ၏အစ်မဂျိုးဇက်ဟာရှေ့နေဟူဂိုက Black, အနာဂတ်တရားရုံးချုပ်တရားမျှတမှုလက်ထပ်နှင့်, ထို Foster မိသားစုဆက်သွယ်မှုအများအပြားခဲ့ကြသည်အဖြစ်အချိန်တွင်ဖွယ်ရှိ Ku Klux Klan နှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်။ ဗာဂျီးနီးယားဥပဒေစာကြည့်တိုက်တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်စတင်ခဲ့သည်။
သူမသည်ရှေ့နေ, Clifford Durr တစ် Rhodes ပညာရှင်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနှင့်လက်ထပ်ခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့အိမ်ထောင်ရေးစဉ်အတွင်းသူတို့သမီးလေးယောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ စီးပွားပျက်ကပ်ထိမှန်သည့်အခါသူမကဘာမင်ဂမ်ရဲ့အဆင်းရဲဆုံးကိုကူညီကယျဆယျရေးလုပျငနျးတှငျပါဝငျဖြစ်လာခဲ့သည်။ အဆိုပါမိသားစု 1932 ခုနှစ်တွင်သမ္မတ Franklin D. Roosevelt ရုစဗဲ့ကိုထောက်ပံ့ခြင်း, Clifford Durr တစ်ဦးဝါရှင်တန်ဒီစီ, အလုပ်နှင့်အတူဆုခခြံခဲ့ရ: ပျက်ကွက်ဘဏ်များနှင့်အလျောက်ငါတို့၌ဖြစ်သောပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးဘဏ္ဍာရေးကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်တိုင်ပင်။
အဆိုပါ Durrs Seminary မှာဟေးလ်, ဗာဂျီးနီးယားအတွက်အိမ်မှာရှာဝါရှင်တန်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ဗာဂျီးနီးယား Durr အမျိုးသမီးများတိုင်းအတွက်ဒီမိုကရက်တစ်အမျိုးသားကော်မတီနှင့်အတူသူမ၏အချိန်စေတနာ့ဝန်ထမ်းများနှင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ကြသူအများအပြားမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
သူမသည်သူကမကြာခဏတောင်ပိုင်းအတွက်မဲပေးရာမှအမျိုးသမီးများ၏တားဆီးဖို့အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်မူလကြောင့်, စစ်တမ်းအခွန်ဖျက်သိမ်းခြင်းများ၏အကြောင်းရင်းတက်ယူခဲ့ပါတယ်။ သူမသည်စစ်တမ်းအခွန်ဆန့်ကျင်နိုင်ငံရေးသမားတွေစည်းရုံး, လူ့လူမှုဖူလုံရေးများအတွက်တောင်ပိုင်းညီလာခံ၏မြို့ပြခငြ့်အရေးကော်မတီနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းသည်နောက်ပိုင်းတွင်စစ်တမ်းအခွန် (NCAPT) ဖျက်သိမ်းဖို့အမျိုးသားကော်မတီဖြစ်လာခဲ့သည်။
1941 ခုနှစ်မှာ Clifford Durr ဖက်ဒရယ်ဆက်သွယ်ရေးကော်မရှင်မှလွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ အဆိုပါ Durrs ဒီမိုကရက်တစ်နိုင်ငံရေးနှင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုနှစ်ဦးစလုံးအတွက်အလွန်တက်ကြွနျြရစျ။ ဗာဂျီးနီးယားထည့်သွင်းသောစက်ဝိုင်းထဲမှာပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ Eleanor Roosevelt ရုစဗဲ့ နဲ့ Mary McLeod Bethune ။ သူမသည်တောင်ပိုင်းညီလာခံ၏ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာခဲ့သည်။
1948 ခုနှစ်, Clifford Durr အလုပ်အမှုဆောင်နျဌာနခှဲခန့်အပ်ဘို့ Truman ရဲ့သစ္စာရှိမှုကြိနျဆိုဆန့်ကျင်ခြင်းနှင့်အကြိနျကိုကျော်ကသူ့အနေအထားနှုတ်ထွက်ခဲ့သည်။ ဗာဂျီးနီးယား Durr သံတမန်များမှအင်္ဂလိပ်ဆုံးမဩဝါဒပေးဖို့လှည် ့. Clifford Durr သူ၏တရားအလေ့အကျင့်ပြန်လည်ရှင်သန်ရန်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဗာဂျီးနီးယား Durr 1948 ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပါတီရဲ့ဆန်ခါတင်ဟယ်ရီက S Truman ကျော်ဟင်နရီ Wallace ထောက်ခံနှင့်မိမိကိုယ်ကို Alabama အဘိဓါန်ထဲကနေအထက်လွှတ်တော်များအတွက်တိုးတက်ရေးပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမသည်ကြောင်းမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကာလအတွင်းဖော်ပြထား
1950 ခုနှစ်, Durrs Clifford Durr တစ်ကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်အတူရှေ့နေအဖြစ်အနေအထားကိုယူဘယ်မှာ Denver, Colorado, ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ဗာဂျီးနီးယားကိုအမေရိကန်ဆန့်ကျင်ကိုရီးယားစစ်ပွဲအတွင်းစစ်ရေးအရေးယူတဲ့အသနားခံစာလက်မှတ်ရေးထိုး, ထိုသို့ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်ရန်ငြင်းဆန်; Clifford ကြောင်းကိုကျော်ကသူ့အလုပ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ သူလည်းနေမကောင်းကျန်းမာရေးခံစားနေရပြီးခဲ့သည်။
Clifford Durr ရဲ့မိသားစု Montgomery, Alabama တှငျနထေိုငျနှင့် Clifford နှင့်ဗာဂျီးနီးယားသူတို့နှင့်အတူအတွက်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ Clifford ၏ကျန်းမာရေးပြန်လည်ကောင်းမွန်, သူသည်ဗာဂျီးနီးယားရုံးအလုပ်လုပ်နေနှင့်အတူ 1952 ခုနှစ်တွင်သူ၏တရားအလေ့အကျင့်ဖွင့်လှစ်။ သူတို့ရဲ့ဖောက်သည်အမေရိကန်အကြီးအကျယ်အာဖရိကဖြစ်ခဲ့သည်, ထိုစုံတွဲ NAACP ရဲ့ဒေသဆိုင်ရာအကြီးအကဲ ED နစ်ဆင်နဲ့ဆက်ဆံရေးတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
နောက်ကျောဝါရှင်တန်ရှိ, Anti-ကွန်မြူနစ်စိတ္တဇနာအမတ်များသည်ယောသပ်ဆက်မက်ကာသီ (Wisconsin ပြည်နယ်) နှင့်ဂျိမ်းစ် O. Eastland (မစ္စစ္စပီ) ကစုံစမ်းစစ်ဆေးဆောင်မှုနှင့်အတူအစိုးရထဲမှာကွန်မြူနစ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအပေါ်အထက်လွှတ်တော်ကြားနာဖို့ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ Eastland ရဲ့ပြည်တွင်းလုံခြုံရေးဆပ်ကော်မတီတစ်ဦးက New Orleans တွင်ကြားနာမှာအာဖရိကန်အမေရိကန်တွေအဘို့အအရပ်ဖက်အခွင့်အရေးအတွက်အခြား Alabama အဘိဓါန်ထောက်ခံသူ, Aubrey ဝီလျံနှင့်အတူပေါ်လာဖို့ဗာဂျီးနီးယား Durr တစ်ဆင့်ခေါ်စာထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ဝီလျံကိုလည်းတောင်ပိုင်းညီလာခံ၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်, ထိုအိမ် Un-အမေရိကန်လှုပ်ရှားမှုများကော်မတီဖျက်သိမ်းဖို့အမျိုးသားကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ခဲ့သည်။
ဗာဂျီးနီးယား Durr သူမ၏အမည်အား ကျော်လွန်. မဆိုသက်သေခံချက်နှင့်သူမတစ်ဦးကွန်မြူနစ်မဟုတ်ခဲ့ကြောင်းကြေညာချက်ပေးဖို့ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ ရှင်ပေါလု Crouch, ဟောင်းတစ်ဦးကကွန်မြူနစ်, ဗာဂျီးနီးယား Durr ဝါရှင်တန်ရှိ 1930 ခုနှစ်တွင်ကွန်မြူနစ်ပူးပေါင်းကြံစည်မှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ဖူးကြောင်းသက်သေခံကြသောအခါ, Clifford Durr သူ့ကိုလာကြတယ်ကြိုးစားခဲ့နှင့်စဲကြရသည်။
နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးတွေအတွက် Anti-ကွန်မြူနစ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ re-တေဲ့အတှကျဝါသနာတူအဆိုပါ Durrs အားဖြင့်ပစ်မှတ်ထားခံရ။ ဗာဂျီးနီးယားအနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်အမျိုးသမီးတွေသည်အသင်းတော်၌အတူတကွမှန်မှန်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးရှိရာအုပ်စုတစ်စုအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ပါဝင်အမျိုးသမီးလိုင်စင်ပန်းကန်နံပါတ်များ Ku Klux Klan ထုတ်ဝေသောခဲ့ကြသည်, သူတို့သည်နှောင့်အယှက်များနှင့်ဝိုင်းပယ်ထားခဲ့ခြင်း, ဒါကြောင့်အစည်းအဝေးရပ်တန့်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ NAACP ၏ ED နစ်ဆင်နှင့်အတူအဆိုပါစုံတွဲများ '' အသိအကျွမ်းအရပ်ဘက်အခွင့်အရေးများလှုပ်ရှားမှုအများအပြားတခြားသူတွေနဲ့အဆက်အသွယ်သို့သူတို့ကိုငါဆောင်ခဲ့ကြ၏။ သူတို့ကဒေါက်တာမာတင်လူသာကင်း Jr သိတယ်။ ဗာဂျီးနီးယား Durr တစ်ခုအာဖရိကန်အမေရိကန်အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်အတူမိတ်ဆွေများကဖြစ်လာခဲ့သည် ရိုပန်းခြံ ။ သူမသည်တစ်ဦးကအထည်ချုပ်အလုပ်သမတွေတော့အဖြစ်ပန်းခြံငှားရမ်းထား, သူ့ပန်းခြံစည်းရုံးရေးနှင့်သူမ၏အကြာတွင်သက်သေခံချက်အတွက်တန်းတူရေးတစ်အရသာကိုခံစားနိုင်ခဲ့သည်အကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူရှိရာ Highlander ရိုးရာကျောင်းတစ်ပညာသင်ဆုရရှိရန်ကူညီပေးခဲ့သည်။
ရိုပန်းခြံအဖြူရောင်အချင်းလူသား, ED နစ်ဆင်ဖို့သူမထိုင်ခုံပေးခြင်း, ဘတ်စ်ကား၏နောက်ကျောပြောင်းရွှေ့ဖို့ငြင်းဆန်များအတွက် 1955 ခုနှစ်တွင်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်အခါ, Clifford Durr နှင့်ဗာဂျီးနီးယား Durr မှဖြစ်စေ, အတူတူ, သူမ၏ထွက်အာမခံရန်နှင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အကျဉ်းထောင်ဆီသို့ရောက် လာ. , မြို့တော်ရဲ့ဘတ်စ်ကား desegregating များအတွက်ဥပဒေရေးရာစမ်းသပ်ကိစ္စတွင်သို့သူမ၏ကိစ္စတွင်ပါစေ။
နောက်တော်သို့လိုက်သော Montgomery ဘတ်စ်ကားသပိတ်မှောက်မကြာခဏ 1950 နှင့် 1960 ၏တက်ကြွသော, ဖွဲ့စည်းနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှု၏အစအဦးအဖြစ်ရှုမြင်သည်။
အဆိုပါ Durrs, ဘတ်စ်ကားသပိတ်မှောက်ထောက်ပံ့ပြီးနောက်, နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှုကိုထောကျပံ့ဖို့ဆက်ပြောသည်။ အဆိုပါ Freedom ကိုမွငျးစီးစ သည့် Durrs ၏အိမ်တွင်တည်းခိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ Durrs အဆိုပါထောက်ခံ ကျောင်းသားအကြမ်းမဖက်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ (SNCC) နှင့်အဖွဲ့ဝင်များကလာရောက်လည်ပတ်ဖို့သူတို့ရဲ့နေအိမ်ဖွင့်လှစ်။ အရပ်ဘက်အခွင့်အရေးများလှုပ်ရှားမှုအပေါ်အစီရင်ခံရန် Montgomery မှလာမယ့်ဂျာနယ်လစ်ကိုလည်း Durr အိမ်မှာနေရာတစ်နေရာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
အရပ်ဘက်အခွင့်အရေးများလှုပ်ရှားမှုပိုပြီးစစ်သွေးကြွလှည့်နှင့်အနက်ရောင်ပါဝါအဖွဲ့အစည်းများအဖြူမဟာမိတ်များ၏သံသယဖြစ်ကြသည်သကဲ့သို့, Durrs သူတို့မှလှူဒါန်းခဲ့သောလှုပ်ရှားမှုများ၏အမြတ်မှာမိမိတို့ကိုယ်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
Clifford Durr 1985 ခုနှစ်တွင် 1975 ခုနှစ်တွင်ကွယ်လွန်သွား, ဗာဂျီးနီးယား Durr နှင့်အတူပါးစပ်အင်တာဗျူးတွေတစ်စီးရီးကို Magic စက်ဝိုင်းပြင်ပသို့ Hollinger အက်ဖ် Barnard တည်းဖြတ်ခဲ့ကြသည်: ဗာဂျီးနီးယား Foster Durr ၏ကိုယ်တိုင်ရေးအတ္ထုပ္ပတ္တိ။ သူမကြိုက်တယ်နှင့်သူမသိသည်ကိုလူများနှင့်အဆတစ်ခုရောင်စုံရှုထောင့်ပေးမကြိုက်ကြဘူးသူတို့၏အမျိုးအသူမရဲ့အလျှော့စရိုက်လက္ခဏာတွေ။ ထုတ်ဝေအစီရင်ခံထဲမှာ The New York Times ရှိခြင်းအဖြစ် Durr ဖော်ပြထား "တောင်ပိုင်းကျက်သရေနှင့် steely ခံယူချက်တစ်ခု undiluted ပေါင်းစပ်။ "
ဗာဂျီးနီးယား Durr Pennsylvania ပြည်နယ်အတွက်ဘိုးဘွားရိပ်သာအတွက် 1999 ခုနှစ်တွင်အနိစ္စရောက်လေ၏။ လန်ဒန် Times သတင်းစာနာရေးကျွောငွာ "indiscretion ၏ဝိညာဉျကို။ " သူမ၏ကိုခေါ်
မာလာလာဘာဘရာဘော့: နိုဘယ်လ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆု၏အသက်အငယ်ဆုံး Winner
Peggy Fleming က
အဲလစ်ဇဘက် Cady Stanton တို့
Maud Wood ကပန်းခြံ
အဘွားကိုမေးရတယ်ဘယ်တော့မှမ 16 ကြောက်စရာနည်းပညာမေးခွန်းများ
အပြည့်အဝပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း: 2008 Kawasaki Concours 14 အားကစား Tour မော်တော်ဆိုင်ကယ်
ဖိလိပ္ပုသည်တမန်တော် - ယေရှုခရစ်တော်၏နောက်သို့လိုက်
ဓာတု Properties ကိုဥပမာများ
2007 ခုနှစ်အကောင်းဆုံး R & B Songs ရဲ့
မူရင်းကို 54 Beater
ကျောင်းအဆင့်လက်ခံရေးအင်တာဗျူးဘွဲ့ရ: လုပ်ဆောင်စရာများနှင့် Don'ts
တရုတျထဲတွင် "ငါ" ဟုပြောနှင့်ရေးထားမှ Learn
အပိုင်းကျွန်မ: Pro ကိုတစ်တင်းနစ်သွန်သင်ဖြစ်လာလုပ်နည်း
ကျောင်းများတွင်ပင်မထားပါ 10 နည်းလမ်းများ